Dhoolatuskii Xisbiga Kulmiye iyo Taageerayaashiisa + Khudbadihii Masuuliyiinta Xisbiga + Sawirro | Xarshinonline News
Dhoolatuskii Xisbiga Kulmiye iyo Taageerayaashiisa + Khudbadihii Masuuliyiinta Xisbiga + Sawirro
Posted by xol2 on June 4, 2010 · Leave a Comment
Hargeysa (NNN)- Kumaanaan kun oo qof oo ka mid ah taageereyaasha xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE ayaa maanta dhoola tuskii ugu balaadhnaa ka sameeyay fagaaraha beerta Xoriyada ee Magaalada Hargeysa.
Taaageereyaasha xisbiga KULMIYE ee Magaalada Hargeysa ayaa oo iskaga yimid shanta degmo ee Caasimada Hargeysa ayaa iyaga iyo gaadiidkoodii meel laga maro la waayay.
Fagaaraha beerta Xoriyada ayaa buuxsamay oo dadkii qaadi waayay waxaana dadku ay ku sugnaayeen ilaa duleedka fagaarahaasi.
Guddoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee KULMIYE Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo hadal ka jeediyay isu soo baxaasi wuxuu yidhi “Dadweynaha Somaliland ee iskugu yimid Beerta Xoriyada Hargeysa ee ka soo qeyb galay bilowgii olalaha doorashada Madaxtooyada aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin mahad aad u balaadhan ayaan idiin celinayaa. Waxaan ka jecelahay. Haddii aynu nahay dadweynaha reer Somaliland kuwa Gobolkan Maroodi-jeex maanta doorasho ayaynu u diyaar garoobaynaa waxa inagu waajib ah inaynu marka u horreysa nabadgelyo ku shaqayno, oo doorashada nabadgelyo ku gaadhno.”
Waa inaynu ilaalinaa oo aynu xaq dhawraa xisbiyada kale maalmahooda waxaynu u baahan nahay inaynu ciidamada nabadgelyada gacan ku siino nabadgelyada ilaalinteeda anagoo aad iyo aad ugu mahad naqayna hawsha ay hayaan.”
Guddoomiyaha KULMIYE wuxuu xukuumada Madaxweyne Rayaale ku eedeeyay inaanay waxba qaban muddo sided sanadood ah oo uu xilka hayay waxaanu yidhi “Maanta sideed sanadood oo dhow dhow ayuu joogaa Daahir Rayaale Kaahin, waynu aragnaa waxaynu ku tallo jirnaa inaynu wax ka bedelno waxaasi uu ka baaqsaday ee xisbiga UDUB fulin waayay, waxaynu samayn doonaa waad aragteen xisbiga KULMIYE barnaamijkiisa waxaynu wax ka bedeli doonaan xaga dhaqaalaha, nolasha, wadooyinka, cadaalada iyo caafimaadka.”
“Xisbiga UDUB illaa maanta Barnaamij siyaasadeed oo uu soo saaray ma jirto waad aragteen oo wax uu sheegan karo iyo wax uu qabtayba ma jiro, wuxuu soo bandhigaa waa cay , hantidii ummadda ee uu lunsaday, cadaaladii uu xumeeyay iyo waxqabad la’aan. Walaalayaal waxa barnaamijkayaga ku cad muwaadiniinta reer Somaliland meel kasta oo ay joogaan inaan xuquuqdooda la duudsiyin,”ayuu yidhi Md. Siilaanyo.
Md. Axmed Siilaanyo wuxuu u balan qaaday ciidamada Somaliland inay u samaynayaan darajadii ciiddanimo, isla markaana ay fulinayaan sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda dadka laga tirada badan yahay oo ay siyaasada si buuxda uga qeyb gelinayaan.
“Waxaanu ku balan qaadaynaa inaan boob iyo dhac lagu samayn Ganacsiga oo aanu madax banayno, waxaanu balan qaadaynaa inaanu dadka cadaalada, dekadaha dalka oo la balaadhiyo iyo wadooyinka aanu balaadhino, xisbiga UDUB waxay yidhaahdaan in shaqaalaha dawlada Xisbiga KULMIYE ay eryi doonaan waxaan leeyahay inaanay arrintaasi waxba ka jirin oo ay shaqaalaha dawladu qaranka u shaqeeyaan oo ay xuquuqdoodii leeyihiin. Qofka aan sharciga jabin wax loo sheeganayaa ma jirto. Waxa ummadda lagu bajinayaa inaanu wax xidhi doono inaanu wax dili doono. Anagu kuma tallo jirno inaanu cidna godob u raacno waxaanu ku tallo jirnaa inaanu dhisno dad iyo dal caafimaad qaba,”ayuu yidhi Guddoomiyaha xisbiga KULMIYE ahna Murashaxa Madaxweynaha ee xisbiga KULMIYE.
Axmed Siilaanyo wuxuu ammaan u soo jeediyay Komishanka doorashooyinka qaranka oo uu ku tilmaamay rag si wanaagsan u shaqeynaya waxaanu bulshada ugu baaqay in lala shaqeeyo.
Guddoomiyaha KULMIYE wuxuu shacbiga ka dalbaday inay codkooda siiyaan xisbiga KULMIYE oo uu carabka ku dhuftay inuu dalka isbedel weyn ku samayn doono.
Guddoomiye Ku Xigeenka koowaad ee Golaha Wakiilada Somaliland Md. C/Casiis Maxamed Samaale oo ka hadlay isu soo baxan ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal ka soo yeedhay Madaxweyne Rayaale ee uu ku durayay Shirgudoonka Wakiilada waxaanu yidhi “Madaxweynaheena Md. Daahir Rayaale Kaahin, shalay khudbadiisii uu ummadda ugu sheegi lahaa wuxuu ummadda u qabtay waxaad ogaydeen wuxuu kaga hadlay Golaha Wakiilada, waxay muujinaysaa in Madaxweynuhu shirgudoonka jecel yahay soo ma aha? Tolloow muxuu ku jeclaaday? Golaha Wakiiladu waa Golihii sharci dejinta waa dabarkii xukuumadda waa kii hubinayay waxa sida dharaarta u muuqata inuu Madaxweynuhu intaba ka diiday Golaha Wakiilada. Shirgudoonku isagoo kaashanaya Gole weynaha wuxuu hor istaagay sharci jabintii u caadada ahayn Madaxweynaha. Madaxweynuhu wuxuu ahaa markii sharcigii lagaga adkaaday kii isagoo isticmaalaya ciidamadii qaranka xoog ku galay Gurigii Wakiilada oo uu quful ku xidhay. Waxaanu ummadda reer Somaliland uga mahad naqaynaa siday ugu hiilisay Golaha Wakiilada. Waxaanu halkan ugu ducaynaynaa labadii dhalinyarta ahaa ee ku shihiiday dhacdadii lagu furtay Golaha Wakiilada markii uu qufulka ku jabiyay kaligii Taliye Daahir Rayaale Kaahin.”
Guddoomiye Ku Xigeenka koowaad ee Wakiiladu wuxuu sheegay in Golihiisu isagoo kaashanaya deeqbixiyeyaasha uu dhistay laba xarumood oo bilicsan, halka uu Madaxweynahana ku dhaliilay inuu 13 sanadood dhex fadhiyo Gurigii Kaligii Taliye Moorgan.
Sidoo kale, waxa xafladaasi ka hadlay Guddoomiye Ku Xigeenka koowaad ee xisbiga Mucaaridka ah ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna xukuumada ku tilmaamay mid marjo ah oo ku guuldaraysatay xilkii iyo waajibaadkii loo doortay.
Mudane Muuse Biixi wuxuu shacbiga ugu baaqay inay codkooda siiyaan xisbiga KULMIYE waxaanu ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka.
Dhinaca kale, isu soo baxan oo ka dhacay Gobolada iyo degmooyinka dalka ayaa sida wararku sheegayaan ku dhamaaday jawi nabad gelyo ah.
← Maxkamadda Sare ee Maraykanka oo go’aan ka soosaartay dacwada Gen. Maxamed Cali Samatar
Taageerayaasha Xisbiga UCID oo khalkhal geliyay xisbiyada kale ee KULMIYE iyo UDUB →